Izimpendulo Zivula Okuthandwayo Kokuxhumana | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 29, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Njengoba izinkampani ezinkulu zobuchwepheshe bokumaketha zihlangana futhi zithole ezinye izinhlelo zokusebenza kumxube wazo womkhiqizo, kuvame ukuba negebe ekhonweni lokuthi ikhasimende lisethe izintandokazi zokuxhumana. Uma ufuna i-imeyili, iya kusayithi elilodwa, uma ufuna izexwayiso zeselula, enye… uma kuyi-SMS enye futhi. Ngokuvumelana ne I-Forrester, i-77% yabathengi bafuna ukwazi ukunquma ukuthi amabhizinisi kufanele akwazi kanjani ukuxhumana nawo.
Okokuqala, Izimpendulo inikeza abathengisi ikhono lokuqoqa kalula nokuphatha okuncamelayo kuwo womabili amaphuzu asezidijithali nangokomzimba, ngenkathi kuncishiswa ubungozi bezinhlawulo ezibizayo namacala enkantolo, konke kungaphakathi kwesikhulumi sobuchwepheshe esisodwa.
Eminyakeni embalwa edlule, imikhiqizo emikhulu enedumela elihle iye yahlaselwa ngamacala okufuna amacala amashumi ezigidi zamaRandi wokumaketha kumakhasimende ngaphandle kwemvume. Lawa maphutha abizayo ayenzeka ngoba abathengisi abanabo ubuchwepheshe obufanele bokuhlanganisa nokuphatha kahle izintandokazi nezimvume zamakhasimende kuzo zonke izindawo zokuxhumana, kusuka ku-imeyili kuye kuhlelo lokusebenza lweselula kuze kufike lapho kuthengiswa khona. I-Responsys Interact Preference yenza ukuba abathengisi bakwazi ukuqoqa le datha ngendlela efanele, bese beyisebenzisa ngokuhlangana nenye idatha yephrofayili, njengomlando wokuthenga kanye nemininingwane yabantu, ukuletha imilayezo engahlukanisiwe kuphela, kepha futhi eyamukelekile. USteve Krause, Iphini Likamongameli Ophakeme Lokulawulwa Komkhiqizo kwa-Responsys
Izintandokazi Zokusebenzisana Zokuphendula ivumela abathengisi ukuthi
Thuthukisa ukubuka okuhlangene kokuncamelayo nezimvume kuso sonke isiteshi - Izinkampani eziningi zinemithombo eminingi yedatha yokuthandwa kwamakhasimende egcinwe kuzinhlobonhlobo zolwazi.
Qoqa okuncamelayo noma yikuphi lapho abathengi bekhona - noma ngabe bathenga esitolo, bahlanganyela nomkhiqizo ku-Facebook, noma baphequlula isayithi elihambahambayo, abathengi bangabelana kalula nangempumelelo ukuthi bangathanda kanjani imikhiqizo ukuxhumana nabo.
Nciphisa ubungozi bokuhambisana - I-Responsys Interact Preference iqinisekisa ukunemba kwezimvume zamakhasimende futhi igcina lolo lwazi endaweni emaphakathi, efundekayo, esebenza njengomthombo owodwa weqiniso wezintandokazi zamakhasimende.
Ngokuhambisana nokuziphatha okunothile, ukuphathwa kwabantu kanye nedatha yezenhlalakahle Izimpendulo sezivele zidalula abakhangisi, Izintandokazi Zokuphendula Zokuphendula zigcwalisa iphrofayili yekhasimende - kuthuthukisa ukuqonda ngobunikazi beqiniso babathengi futhi kunikeze amandla abathengisi ukwakha ubudlelwane obujulile, obuhlala njalo futhi obunenzuzo namakhasimende abo.
Tags: izintandokaziizimpenduloIzintandokazi Zokusebenzisana Zokuphendulaizintandokazi ezihlanganisiwe
UDorothy E Barnes
Ngo-Apr 29, i-2013 ku-9: i-37 PM
Siyabonga ngale ndatshana! Ngicabanga ukuthi kuhle impela ukuthi ikhono lokuqoqa kalula nokuphatha okuncamelayo kuwo womabili amaphuzu asezidijithali nangokomzimba maduze kuzoba yinto yesikhathi esedlule!